OBS ABO fi KFO'n waliin hojjechuuf murtessaniiru. Ibsa isaanii kana daawwadhaa! Kichuu
HomeAfaan OromooTVOBS ABO fi KFO’n waliin hojjechuuf murtessaniiru. Ibsa isaanii kana daawwadhaa!
OBS ABO fi KFO’n waliin hojjechuuf murtessaniiru. Ibsa isaanii kana daawwadhaa!
ABO fi KFO’n waliin hojjechuuf murtessaniiru. Ibsa isaanii kana daawwadhaa!
Gaafa ABOn galu simannaa hoo’aa taasisuun firaafis diinaafis ergaa cimaa qabaata.ABO-WBO simachuuf Oromoo ta’un gahadha.
Kanaaf haala qindaa’aa fi hoo’aa ta’een simannaa taasisuutu nurraa eegama. Haaluma kanaan kallattii karra Finfinnee shananiin haala miidhagaafi tasgabbaa’aadhaan ganama bariidhaa eegalee addabaabayii masqalaatti wal arguu qabna. Kanaafuu uummanni iddoo fagoorraa dhufan fakkeenyaaf
• Iluu abbaabooraa irraa jalqabee hanga walisoo warri jirtan utuu jalabultii dhuftanii (Finfinnee buluurra walqindeessuufis ta’ee baasii qusachuuf Sabbata buluutu gaariidha)
• Wallaga lixaarraa kaasee hanga Amboo warri jirtan utuu jalabultii dhufanii (finfinnee buluurra walqindeessuufis ta’ee baasii qusachuuf Buraayyuu buluutu gaariidha)
• Harargee lixaarraa kaasee hanga walanciitii warri jiran utuu jalabultii dhufanii (finfinnee buluurra walqindeessuufis ta’ee baasii qusachuuf Adaamaa ykn Bishooftuu ykn Duukam buluutu gaariidha)
• Booranaafi Gujiirraa kaasee hanga Mojoo warri jirtan utuu jalabultii dhuftanii (Finfinnee buluurra walqindeessuufis ta’ee baasii qusachuufis Adaamaa ykn Bishooftuu ykn Duukam buluutu gaariidha)
• Magaalonni Finfinneetti dhihaatan immoo nagaya ofii too’achaa naamusaan ganamarraa eegaltanii uummata magaalotaa fi godinaalee fagoorraa dhufan waliin haalaa aadaa fi duudhaa uummata keenyaa calaqqisiisuun ganamaan addabaabaayyii masqalaatti wal arguu qabna.
• Itti dabalatees warri fardeen qabdan daalee fi magaala keessan kaasaa Finfinnee keessa garmaamnee goota keenya simachaa abbaa biyyummaa keenyas olkaafee haa mul’isnuu.diinas mataa irraa haa ajjeefnuu.
Harmeen kun Gudaritti laaqana manasaaniitti nu nyaachisan.waan nama dhibu Faajjii Lapheesaaniirraa argitan kana guyyaa kaleessaan boolla keessaa